Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 15)
Taylor Swift wuxuu ka helaa waxyaabo gaar ah albumkeeda cusub 'Sumcad' ee Apple Music
Apple Music waxay halbeeg u noqotay xiriirka taageere-heesaha, waana sababta Taylor Swift ula wadaagay waxyaabo dheeri ah albumkeeda cusub.
YouTube wuxuu ka shaqeeyaa daadinta batteriga barnaamijkeeda iOS
Soosaarayaasha Google ee iyagu horay u og tan ayaa ka shaqeynaya sidii loo xalin lahaa dhibaatada sida ugu dhaqsiyaha badan.
Adeegga qulqulka Disney ayaa ka qiime jaban kan Netflix
Sida laga soo xigtay agaasimaha Disney, Bob Iger, qiimaha adeegga fiidiyowga ee 'Disney' ayaa ka hooseeya kan Netflix.
HomePod ee soo socda ayaa ku dari kara Aqoonsiga Face-ka sida ay qabaan falanqeeyayaasha
Ma hayno nooca ugu horreeya ee ku hadla af-hayeenka Apple, HomePod waxaana durba jira warar xan ah oo sheegaya ...
IOS 11.2 Beta 3 waxay ku dareysaa isbedelo waxayna cadeyneysaa shaki ku saabsan WiFi iyo Bluetooth
Apple waxay ku dartay waxoogaa isbeddel ah iOS 11.2 Beta 3 oo tilmaam u ah xarunta xakamaynta ee iPhone X iyo sida WiFi iyo Bluetooth u shaqeeyaan
IPhone 7 iyo 6s ayaa hogaaminaya liiska terminal-yada ugu iibinta fiican adduunka intii lagu jiray rubucii u dambeeyay
Hoos u dhaca ku yimid qiimaha iPhone 7 iyo iPhone 6s ayaa ka dhigay labada terminaal iibiyaasha ugu fiican inta lagu gudajiray rubucii lasoo dhaafay.
Waxay maareeyaan inay furaan Aqoonsiga Wajiga ee iPhone X oo leh maaskaro ... laakiin waa inaadan ka walwalin
Maaskarada ayaa ahayd shayga lagama maarmaanka u ah in laga boodo furitaanka Aqoonsiga Face-ka ee iPhone X. Maaskaradu waxay u dhigantaa qiimo ka badan 150 doolar.
Apple waxay hagaajinaysaa xogteeda ka mid noqoshada iyo kala duwanaanta ganacsigeeda
Big Apple wuxuu daabacay warbixintiisa sanadlaha ah ee ka mid noqoshada iyo kala duwanaanshaha shirkada dhexdeeda taasoo muujineysa sida xogtu u hagaagtay.
IPhone X oo leh iOS 11.1.1 horeyba wuxuu u leeyahay demo ugu horeysay ee "la waayey" Jailbreak
Xaqiiqduna waxay tahay in Jailbreak ay tahay wax dadka isticmaala badankood ay ka maqli karaan meel fog, xitaa ...
Apple miyuu ku dhammeeyey dhibaatooyinkan oo ku jira iOS 11? Taasi waa waxa ay leedahay shirkadda Cupertino, waan hubinay.
IPhone X ma jecla qabowga, waxaan soo bandhigeynaa «Coldgate»
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha 'iPhone X' ayaa joojiya shaqadooda markii ay la kulmaan heerkul hoose, cillad ay Apple horay uga warqabtay isla markaana si dhakhso leh u hagaajin doonto
Infuse waxaa lagu cusbooneysiiyay taageerada HDR
Infuse 5 ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 5.6 oo la jaan qaadaya waxyaabaha HDR iyo iPhone X cusub, oo ah casriyeyn bilaash ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasheeda.
Saddex ka mid ah iibiyeyaasha Apple ayaa muujinaya natiijooyinkooda maaliyadeed iyo haa, dhammaantood way fiicnaadeen
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa saddex alaab-qeybiyeyaal muhiim ah oo ka tirsan shirkadda Cupertino oo muujiyay ...
Xarunta Booqda ee Apple Park ayaa albaabada loo furi doonaa 17-ka Nofeembar
Apple waxay shaacisay in laga bilaabo Nofeembar 17, Xarunta Booqashada ee Apple Park ay u furan tahay qof kasta oo doonaya inuu galo.
Apple wuxuu bilaabayaa iPad-ka bilaa xadka ah sanadka 2018
Xanta cusubi waxay xaqiijineysaa in iPad-ka bilaa xayndaabka ah ee qaabka loo yaqaan 'iPhone X' uu imaan doono sanadka 2018 oo ay weheliso qalin cusub oo 'Apple Pencil', isagoo dayactiraya shaashadda LCD
Podcast 9 × 09: IPhone X wuxuu Dareemo Dareen
IPhone X mar hore ayuu wadada marayaa waxaanan falanqeyneynaa fikradaha maalmahan koowaad, dib u eegista iyo khibradeena.
Waqti ka waqti, cayayaanka ayaa ka soo baxa iCloud Activation, sida midka aan dooneyno inaan ku tusno maanta oo amniga halis weyn gelinaya.
Samsung waxay lumisay dagaal kale oo ay la gasho Apple, markanna "slide to unlock" patent
Shirkadda Cupertino ayaa aragtay qaraarka "siibid si loo furo" patent-ka oo lagu xalliyey wanaaggeeda ...
IOS 11.2 beta 2 dadweynaha ayaa yimid, iyada oo waxoogaa lama filaan ah sida Apple Pay Cash
Apple Pay Cash waa halyeeyada warkan shaki la'aan. Aan aragno waxa ay ka kooban yihiin wararkaas xiisaha leh.
IOS 11.2 waxay u oggolaaneysaa horumariyeyaasha inay bilaabaan dalabyada rukunka
Apple waxay ufududayn doontaa hawshan horumariyeyaasha, waxay awood u yeelan doonaan inay dadka isticmaala siiyaan dalabyo qorshooyinka rukunka ah markay doonaan.
Apple si ay u isticmaasho alloys cusub si ay u horumariso caymiska iPhone
Apple waxay raadineysaa xal, waxay durbaba tijaabineysaa aalado cusub si loo wanaajiyo tabinta taleefannadeeda.
Aragtiyaha ayaa bilaabmaya: Muxuu iPhone X u leeyahay laba baytariyada?
Labada baytariyada ee ku jira iPhone X waxay khalkhal ka dhex abuurayaan injineerada ka baxsan Apple. Baytariyadaan waxay laba saac ku kordhiyaan ismaamulka aaladda.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.2 iyo watchOS 4.2 Beta 2 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay soo bandhigtay iOs 11.2 Beta 2 iyo watchOS 4.2 Beta 2, waqtigan oo kaliya loogu talagalay horumariyeyaasha, waxaanan kugula socodsiinaynaa wararka ay keenayaan.
IPhone X wuxuu leeyahay shaashadda ugu fiican uguna horumarsan suuqa
DisplayMate ayaa falanqeeyay shaashadda iPhone X waxayna ku soo gabagabeysay inay tahay shaashadda ugu fiican ee waligeed ay isku dayday, iyadoo ku soo socota inay ku qiimeyso sida ugu fiican.
IPhone X wuxuu gaaraa dhibcaha ugu fiican ee sawirrada sida ku cad DxOMark
IPhone X wuxuu gaaraa dhibcaha ugu fiican ee sawir ee ay ku guuleystaan ​​taleefan kasta oo casriga ah, in kasta oo aanu aad ugu badnayn qaybta fiidiyaha.
Apple wuxuu horey uga digay "shaashadda gubtay" ee iPhone X
Apple waxay horeyba nooga digtay in helitaanka sawirada joogtada ah ay tahay dabeecad caadi ah laakiin ... damaanad qaadku ma dabooli doonaa? Waxay umuuqataa in maya.
Animoji Karaoke wuxuu ku soo duulay internetka
Ka dib markii la bilaabay iPhone X, Animoji waxay noqdeen halyeeyada fiidiyowyada iyaga oo u ciyaaraya hees kasta oo la qiyaasi karo
Baro sida loogu adeegsado iPhone X cusub safarka Apple ee la hagayo
Apple waxay soo bandhigeysaa fiidiyow cusub oo sharaxaya howlgalka iPhone X si aan u ogaanno howlgalka cusub ee qalabka.
Waxay xadaan 300 iPhone X markii la geynayo Apple Store
Seddex nin oo wajiga daboolan ayaa ka xaday in ka badan 300 iPhone Xs gaari xamuul ah oo keena UPS kaas oo qorshuhu ahaa in lagu geeyo Apple Store.
IPhone X waxaa loo qorsheeyay inuu suuqa ku dhufto 2018
Qorshayaasha Apple ee iPhone X waxay ahayd inay ku soo bandhigaan moodeelkan shaashad aan xaddidneyn sanadka 2018, laakiin waxay doonayeen inay ku hormariyaan soo bandhigiddooda hal sano.
Khadadka waaweyn ayaa dib ugu soo laabtay iPhone X
Safafka ayaa mar kale la soo hordhigay Apple Stores-ka adduunka oo dhan hortiisa intaan la bilaabin iPhone X
Warbaahintu waxay ammaaneysaa (xilligan) iPhone X cusub
Warbaahin badan ayaa si aad ah uga hadlay iPhone X. Taasi waa sababta Apple u faraxsan yahay (ama ugu yaraan hadda).
Faa'iidada Qualcomm ayaa hoos u dhacday 90% tan iyo markii ay dacwadda la gashay shirkadda Apple
Falanqeeyayaasha ayaa hadda soo wariyay in faa'iidadooda ay hoos u dhacday 90%, xaalad ka dhigeysa Qualcomm dhagax iyo meel adag
Circle, waa hab fudud oo aad lacag ugu diri karto ugana heli karto moobilkaaga
Circle waa qaab isweydaarsi badan oo ikhtiyaari ah oo awood u leh in lagu bixiyo lacagaha u dhexeeya dadka qaab fudud oo aan lahayn nooc komishan ah
IPhone X Qiimaha Joogtada Ah Ma Lahan Kaamirad Qoto Dheer 3D Qarsoon
Kaydinta kharashyada, Apple waxay tirtiri doontaa kamaradda qiimaha yar ee iPhone X ee runta qoto dheer 3D iyadoo lagu saleynayo astaamo kale.
Nintendo waxay ugu yeertaa dakhliga Super Mario Run "mid la aqbali karo" sanad kadib
Sanad kadib kooxda weyn ee N waxay uqalmayaan natiijooyinka dhaqaale inay yihiin "wax la aqbali karo", sida muuqata way ku fashilmeen inay qabtaan shacabka guud.
Xcode 9.1 ayaa hadda la heli karaa taageerada hagaajinta ee loogu talagalay iPhone X
Apple waxay soosaartay nooca 9.1 ee barnaamijkeeda horumarinta barnaamijka Xcode kaas oo hagaajinaya taageerada qalabka cusub: iPhone X.
IPhone X wuxuu leeyahay Reachability sidoo kale wuxuu la shaqeeyaa tilmaam
IPhone X wuxuu leeyahay shaqeyn Reachability sida aan aragnay kadib dib u eegista ugu horeysa ee lagu daabacay qalabka cusub
IPhone X wuxuu qarin doonaa nuxurka ogeysiisyada marka la eego, adiguba waad awoodi kartaa.
Ikhtiyaar u gaar ah oo horey u jiray laakiin in yar ayaa og in lagu dhaqaajin doono si toos ah iPhone X oo u oggolaan doonin cidna inay aragto ogeysiiskeena
Xarunta Booqashada ee Apple Park way dhammaatay
Websaydhka caanka ah ee AppleInsider wuxuu ka mid yahay kuwa mas'uulka ka ah faafinta wararka in badan ama ka yar aan wada ogayn ...
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.2 iyo watchOS 4.2 Beta 1 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay soo saartay laba Betas cusub, macruufka 11.2 iyo watchOS 4.2, oo ay heli karaan kuwa horumariya, halka aan wali sugeyno iOS 11.1
Apple waxay ku boorinaysaa horumariyeyaasha inay la qabsadaan barnaamijyadooda iPhone X cusub
Imaatinka iPhone X ee suuqa ayaa ahaa baaqii ay fiiro gaar ah u siisay Apple ee soo saarayaasha si ay ula qabsadaan barnaamijyadooda.
Google ayaa bixin doonta 3.000 milyan si ay u noqoto mashiinka raadinta ee iOS
Ma bilaashbaa inay ahaato mashiinka raadinta asalka ah ee iOS? Xaqiiqdu waxay tahay maya, oo Google waxay ku kici kartaa qiyaastii 3.000 bilyan oo doolar ganacsiga.
Apple waxay ceyrisay injineer ay gabadhiisu is tustay iphone X markii ay booqaneysay aabaha
Isla maalintaas fiidiyowga ay soo dhigtay gabadh injineer ka tirsan shirkadda Apple, laga duubay, qayb ahaan, xerada Apple, ayaa faafisay, waxay shaqada ka eriday injineerka.
IPad 3 wuxuu ka mid noqon doonaa aaladaha guridda ee Apple 31-ka Oktoobar
IPad 3 wuxuu ka mid noqon doonaa aaladaha guridda bisha Oktoobar 31, taariikhda ay noqonayso 5 sano tan iyo markii ay joojisay iibinteeda
Apple waxay horumarinaysaa taariikhaha bixinta ee iPhone X
Shalay, Jimce, Noofambar 27, ayaa la sii daayay IPhone X, taleefanka cusub ee Apple, iyo sida dhammaan ...
Hindiya ayaa dhaaftay Mareykanka waxayna noqotay suuqa labaad ee ugu weyn ee taleefannada casriga ah
Hindiya ayaa dhaaftay Mareykanka oo ah waddanka labaad ee ugu taleefannada casriga ah adduunka oo dhan laga iibiyo
Instagram waxay bilaabeysaa miirayaal cusub oo Halloween ah iyo Superzoom fiidiyowyadeena
Instagram ee macruufka waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo saameynta Halloween ee laga filayo Sheekooyinkaaga iyo sidoo kale Superzoom fiidiyowyada.
Apple waxay iibsatay shirkadda InVisage ee kaamerada dareemayaasha
Bilihii la soo dhaafay, Apple ayaa mar kale soo jiidatay buugga jeegga waxayna iibsatay shirkadda dareemayaasha kamaradaha ee InVisage.
Qalabka Apple ee ku jira "shaashadda oo dhan" foomka wuxuu ka soo qaatay CURVED / sheybaarrada
Waana inaynaan haysan tusaalayaal cusub oo miiska saaran oo aan haddaba aragno faahfaahinta ama tilmaamidda ...
Podcast 9 × 08: IPhone X waa kan
Toddobaadkan waxaan ku eegeynaa wararka soo muuqday wax yar uun ka hor bilowgii taleefanka iPhone X, wax soo saarkiisa iyo cilladaha kale ee jira.
Qayb saddexaad oo lala xiriirinayo fadeexadda "Celebgate" ayaa soo muuqata
Seddex sano kadib, isticmaale cusub oo lala xariirinayo fadeexadan ayaa soo muuqday FBI-da ayaa lashaqeynaysa Apple si ay ugaarsadaan dambiilaha.
Baro barnaamijka barnaamijka 'iOS' oo leh koorsooyinkan gaarka ah
Ka faa'iideyso fursaddan weyn si aad u barato sida barnaamijyada iyo barnaamijyada loogu adeegsado barnaamijka iOS 11 si fudud oo qiimo dhimis weyn ah
Apple waxay ka jawaabtaa Bloomberg: waa been abuur in kalsoonida Face ID ay hoos u dhacday
Kahor eedeymaha culus ee Bloomberg, Apple waxay kujawaabtay iyadoo si cad u inkirtay inay hoos udhigtay kalsoonida aqoonsigeeda Face
FBI-da ma xamili karto 6.900 oo taleefan sir ah sanadka 2017
Xogtii ugu dambeysay ee FBI-da waxay ka hadashaa ilaa 6.900 aaladaha mobilada ee la duubay oo aysan awoodin inay helaan inta lagu gudajiray 2017.
Instagram waxay soo bandhigaysaa hawl cusub oo si toos ah loogula socodsiiyo saaxiib shaashad kala qaybsan
Instagram ayaa dhawaan shaacisay hawl cusub oo aan si toos ah ula qaban karno saaxiibkeen isla mar.
Apple waxay heli kartaa oo keliya 20 milyan oo iPhone Xs ah oo la heli karo sannadkan
Warbixinnadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in Apple ay heysan karto oo keliya 20 milyan oo unug oo ka mid ah iPhone X dhammaadka sanadka.
Bloomberg waxay ku eedeysaa iPhone X soo saarista cilado soosaarayaasha
Soosaarka iPhone X wuxuu madax xanuun ku yahay Apple: dhibaatooyinka alaab-qeybiyeyaasha, qaybo la'aanta iyo isbeddelada khadadka isku imaatinka.
IOS 11.1 Beta 5 Hada Loo Heli Karo Horumarinta
Apple waxay soo saartay Beta 5 cusub ee iOS 11.1 marka lagu daro inta kale ee watchOS, macOS iyo tvOS betas si ay u dhamaystiraan dhamaan nidaamka deegaanka.
Samsung waxay bilaabi laheyd saldhig lacag la'aan ah sida Apple's AirPower
AirPowe waa qalab cusub oo lagu soo dallacayo qalabka Apple. Samsung waxay diyaarin kartaa qalab la mid ah.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee WhatsApp kuma xallinayso dhibaatooyinka Push
WhatsApp waxay sii wadaa inay lahaato arrimo ogeysiis ah oo riix ah oo muhiim ah, labadaba kooxo iyo waxyaabo kale oo aamusan.
Apple waxay rabtaa Qeyb ka mid ah Maqaallada Facebook ee isla markiiba
Facebook wuxuu ka shaqeynayaa abaalmarinta daabacayaasha ku daabaca wararka qaabkooda Maqaalka Degdegga ah.
AT&T waxay isticmaali doontaa buufinta Mashruuca Mashruuca Google si LTE loo keeno Puerto Rico
Duufaanta Maria ayaa ku dhufatay jasiiradda Puerto Rico ee jasiiradda Caribbean-ka. Apple waxay cusbooneysiin doontaa nidaamkeeda hawlgalka ee gaarka ah si ay u keento LTE degdeg ah oo leh AT&T.
Shaashadda 'Pixel 2 XL' waxaa ku soo dhaca cambaareyn culus
Shaashadda Pixel 2 XL waxay soo bandhigaysaa waxyaabo aan caadi ahayn oo leh midabyo iyo dhalanrog isku mid ah markii laga fiirinayo xaglo gaar ah oo aan jeclayn gabi ahaanba
Fiidiyow cusub oo ina tusaya iPhone X oo cad
Fiidiyowga 'Reddit' wuxuu na tusayaa White iPhone X oo shaqeynaya, oo awood u leh inuu si toos ah u arko faahfaahinta naqshadeynta iyo isku xirkeeda
Horumarinta Mastercard ee Hirgelinta Apple Pay
Astercard waxay joojineysaa weydiinta saxiixa Mareykanka iyo Kanada si kor loogu qaado Apple Pay iyo noocyada kale ee lacag bixinta iyadoo la adeegsanayo aaladaha moobaylka
Craig Federighi wuxuu xaqiijinayaa inaysan jiri doonin wax muhiim ah inta ka hartay sanadka
Craig Federighi, oo ah madaxweyne ku xigeenka sare ee softiweerka ee Apple, ayaa sheegay in inta sanadka ka hartay, Apple u dabaaldegi doonin wax muhiim ah oo dheeri ah.
TSMC wuxuu kori doonaa ilaa 10% mahadnaqa iPhone X
TSMC waxay rajeyneysaa koror 10% ah oo faa iidada leh iyadoo ay ugu wacan tahay sumadda cusub ee iPhone X.
IPhone 8 iyo 8 Plus waxay arki doonaan wax soo saarkooda oo hoos u dhacay kadib markii la bilaabay iPhone X
IPhone X wuxuu madoobi doonaa iibka iPhone 8, laakiin intaas kaliya maahan, Apple wuxuu ka fikiri karaa yareynta wax soo saarka iPhone 8 iyo 8 Plus.
Fiidiyowga u-dhow ee LIDAR ee mid ka mid ah Apple's Lexus uu saaran yahay saqafka
Apple waxay horay ugu socotaa mashruucooda si ay u hirgaliso softiweerkiisa caqliga badan mana ahan markii ugu horeysay ee aan aragno ...
Apple wuxuu sii wadaa balaarinta khariidadaha garoonka diyaaradaha ee iOS 11
Khariidadaha Apple ayaa hadda ballaariyay tirada garoomada diyaaradaha oo ay ku siiso macluumaad dhameystiran oo ku saabsan gudaha.
Toddobaadkan Apple waxay soo saartay Beta cusub oo ah iOS 11 taas oo aan ku arki karno sida qaar ...
Ururka Qaranka ee Warbaahinta (NAB) wuxuu ku adkeysanayaa in Apple ay qasab ku tahay inay dhaqaajiso qalabka FM-ka ee lagu dhisay qalabkiisa iPhone 7 iyo iPhone 8.
Google ayaa ka saareysa astaamaha muranka badan khariidadaha Google: Kalooriyada u beddel macmacaan
Waad dhaqaajineysaa socodka si aad u socoto waxay ku tusineysaa tirada kalooriyada aad ku gubeyso jidka laakiin ... maxaa dhacaya haddii ay u rogto macmacaan iyo cunnooyin qashin ah?
IPhone-ku wuxuu ku nool yahay waqtiyadiisii ​​ugu fiicnaa Isbaanish sannadihii la soo dhaafay
Shirkadda Cupertino ayaa macno ahaan la kulanaysa mid ka mid ah waqtiyadeedii ugu fiicnaa Spain tan iyo dayrtii Febraayo ee sanadkan.
Apple Pay waxay imaan kartaa Sweden iyadoo Nordea ay tahay bangiga ugu horeeya ee la jaan qaada
Nordea waa bangi Iswiidhish ah oo markii ugu horreysay isku daraya Apple Pay oo ah habka lacag bixinta. Ku dhawaaqista waxaa la samayn karaa Oktoobar 24.
WhatsApp horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto goobtaada waqtiga dhabta ah
WhatsApp, codsiga farriinta ayaa bilaabay inuu ka dhex shaqeeyo adeegsadayaasheeda macruufka ah suurtagalnimada in lala wadaago goobtayada waqtiga dhabta ah.
Yudonpay waxaa lagu cusbooneysiiyay buug-gacmeed si loo furto dhibcahaaga
Wixii hadda ka dambeeya Yudonpay wuxuu hayaa buug-gacmeed si aan dhibcahayaga ugu beddelanno hadiyado, weligeed sidan uma sahlaneyn in kaararkaaga la isticmaalo
Apple wuxuu kudhawaaday inuu iibsado rugta caafimaadka ee Crossover Healt
Apple waxay si dhow ula socotay caafimaadka muddo dheer waxayna ka shaqeyneysaa hadafkeeda si ay uga caawiso dadka isticmaala ...
IPhone 7 ayaa ugu cadcad iibka ka hor iPhone 8
IPhone 7 ayaa noqday kan ugu caansan kuwa ku dhiiranaaya inay iibsadaan iPhone-ka bishaan la soo dhaafay.
Apple Pay waxay si xawli ah ugu sii kordheysaa Hindiya tallaabo lama filaan ah
Apple Pay waxay imaaneysaa India waana cadahay in Apple ay u jajaban tahay mabaadiideeda iyadoo kuxiran suuqa uu kujiro.
Apple waxay xaqiijineysaa inay horeyba u hagaajisay nuglaanta muhiimka ah ee borotokoolka WPA2
Sida lagu soo warramey AppleInsider, u nuglaanta borotokoolka WPA2 ayaa horeyba loogu xayiray betaskii ugu dambeeyay ee nidaamyada hawlgalka Apple.
Dhammaan wararka ku saabsan iOS 11.1 ee fiidiyowga ah: 3D Touch, Reachability, Emoji iyo inbadan
IOS 11.1 Beta 3 waa diyaar waana idin tusineynaa wax kasta oo Apple ah casriyaynta weyn ee xigta ay ku dari doonto sawirada iyo muuqaalka.
Apple Park waxay ku dhameystireysaa faahfaahinteeda dhismaha maxkamadaha iyo laamiyada laamiyada
Fiidiyow cusub oo daawada diyaaradaha aan duuliye wadin ayaa na tusaya xaaladda hadda jirta ee Apple Park halkaas oo ay ku dhammaystirayaan faahfaahinta iyo sidoo kale dhismaha aagagga firaaqada.
Apple Pay Cash ayaa ku dhow in la bilaabo iOS 11.1
Apple wuxuu sii wadaa inuu sifeeyo Apple Pay Cash si uu dhawaan u bilaabo oo uu weheliyo cusbooneysiinta iOS 11.1 ee wali kujira beta
La wadaag faylasha u dhexeeya macruufka iyo Android la AirDroid
AirDroid waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku wareejiso feylasha inta udhaxeysa aaladaha barnaamijyada kala duwan si deg deg ah oo fudud, waliba bilaash ah.
Xaqiiqada 'Augmented' ayaa ku ciyaareysa ciyaaraha fiidiyowga App Store
Tirooyinku way cad yihiin, Xaqiiqada Dareenka ayaa inta badan xukuma garoonka ciyaaraha fiidiyowga, welina waa haraaga wax kasta oo kale.
Kaamirada TrueDepth ayaa sabab u ah dib u dhaca soo saarista iPhone X
IPhone X wuxuu ku dhow yahay inuu ku dhufto dukaamada Big Apple, laakiin kamaradda TrueDepth waxay yareynaysaa tirada qalabka la soo saaray.
Soo ogow gudaha dhammaan moodooyinka iPhone-ga oo ay ugu mahadcelinayaan infographic ka yimid Bloomberg
Ragga ka socda Bloomberg waxay bilaabeen degel leh is-dhexgal is-dhexgal ah oo aan ku arki karno dhammaan macluumaadka qalabka dhammaan moodooyinka iPhone.
Nalalka nalalka ee Ikea HomeKit oo iswaafajiya
Maalmo ka hor waxaan idinla wadaagey dhamaantiin in nalalka nalalka ee Ikea ay sameynayaan cinwaano cinwaankooda maxaa yeelay waxay la jaan qaadayaan HomeKit ...
9 × 06: Aynu Ka Hadalno Dhageysiga iyo Bluetooth
Pablo Garrido oo ka tirsan kanaalka Audio46 ee Isbaanishka ayaa caddeeya shakiga ku saabsan samaacadaha dhagaha wuxuuna naga dhigayaa talooyinkiisa nooc kasta iyo qiime kasta.
Apple wuxuu bilaabay macruufka 11.0.3 wuxuuna ku sii socdaa xariiqda nadiifinta nidaamka hawlgalka
Apple ayaa si cad u shaacisay macruufka 11.0.3, cusbooneysiinta cusub ee iOS 11 halkaasoo arrimo yar yar lagu xalliyey.
Apple wuxuu ka taxaddaraa deegaanka xitaa baakadeyntiisa
Apple lafteeda ayaa muujineysa sida ay suurtogal u tahay in la sameeyo badeecad xushmeysa deegaanka iyo in aysan lumin ...
Uma qalanto maalgashi ku dhow € 80 si dhakhso ah loogu soo oogo iPhone 8
Runtii ma u qalantaa maalgashi ku dhow € 80 wadar ahaan in lagu raaxeysto lacag-bixinta degdegga ah? Xaqiiqdu waxay tahay in xeedhada iPad-ku ay tahay beddel ka wanaagsan.
64% dadka Mareykanku waxay leeyihiin shey Apple ah
Tani waa sida aan ula qabsanay inaan ku aragno iPhone iyo Macs mid kasta oo ka mid ah filimada la soo dajiyay iyo taxanaha, imisa qof ayaa ka iibsada Apple?
Apple waxay ka tagi doontaa injineernimada canshuuraha si ay uga dhuumato canshuuraha
Isniintii la soo dhaafay, Madaxa Apple Tim Cook wuxuu la kulmay madaxweynaha Faransiiska, E. Macron, ujeedkiisuna wuxuu ahaa in la caddeeyo sida Apple u bixiso canshuuraha.
Fadeexadii Weinstein kadib, Apple wuu baajin lahaa sheekada Elvis Presley
Apple ayaa lagu soo waramayaa inay joojisay mashruuca taxanaha taariikh nololeedka ah ee ku saabsan farshaxanka Elvis Presley ka dib fadeexadii galmada ee uu hogaaminayay Harvey Weinstein
Apple waxay xafiis ka furaysaa Station F, oo ah kan ugu weyn Yurub ee bilowga ah
Sida laga soo xigtay tiro badan oo ka mid ah warbaahinta Faransiiska, Apple ayaa laga yaabaa inay xafiisyo ka furato Station F, oo ah aasaasaha ugu weyn ee bilowga Yurub.
Sanadka 2018 Face ID sidoo kale wuxuu u imaan doonaa qoyska iPad-ka
Falanqeeyayaashu way cad yihiin in tiknoolajiyada Aqoonsiga Aqoonsiga si tartiib tartiib ah looga hirgelin doono moodooyinka qalabka mustaqbalka ee shirkadda Cupertino
Way soo noqotay, ugu dambayntii marin-u-helka badan ee 3D Touch wuxuu yimaadaa Beta 2 ee iOS 11.1
Mid ka mid ah astaamaha 3D Touch ee aadka loo qadariyo ee adeegsadayaashu dib ayey u soo muuqdaan, hubaal way soo noqotay, waxaan dib ugu laabannay howlo badan.
Tim Cook wuxuu indha indheyn ku sameeyaa ka hor inta uusan la kulmin madaxweynaha Faransiiska
Kahor intaanu la kulmin madaxweynaha Faransiiska, Tim Cook wuxuu waxoogaa dalxiis ah ku qabtay waddanka deriska la ah.
Sida laga soo xigtay Ming-Chi Kuo, iPhone X waxaa laga yaabaa inuusan u guuleysan sida aan fileyno
Ming-Chi Kuo, oo ah falanqeeye caan ah oo ka tirsan KGI, ayaa ku dhawaaqay in Apple uu heli doono sanad wanaagsan 2018, laakiin jiilka labaad ee iPhone X ayaa noqon doona mid caan ah.
Sonos waxay dhexgeli doontaa AirPlay 2 iyo Siri kuwa ku hadla
Shirkadda Sonos waxay ku dhawaaqeysaa in Sonos One ku hadlayaa uu la midayn doono tiknoolajiyada Apple ee AirPlay 2 waxaana lagu xakameyn karaa iyada oo loo marayo Siri
Tim Cook ayaa maanta la kulmi doona madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
Isniintaan Maamulaha Apple Apple Tim Cook wuxuu umuuqdaa inuu haysto wax uu ku dhaho Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faransiiska, Emmanuel Macron.
Netflix waxay layaab ku sameysaa iyada oo la bilaabayo ciyaarta rasmiga ah ee Waxyaabaha Qalaad ee loogu talagalay macruufka
Iyadoo aan cidina fileynin, Netflix wuxuu soo bandhigayaa Waxyaabaha Shisheeyaha ah ee Ciyaarta ee Dukaanka App, oo ah sideetan-qaab RPG ku saabsan taxanaha caanka ah.
Maareeyaha Kaabayaasha ICloud oo Ka Baxay Shirkad
Masuulkii ugu dambeeyay ee ka taga Apple waa Erick Bilingsley, oo ah mas'uul mas'uul ka ah kaabayaasha iCloud
Maya, iPhones-kii hore ma ahan mid gaabis ah iOS 11
Daraasad ayaa muujisay in macruufka 11 uusan ahayn mid ka sii daraya marka loo eego noocyadii hore ee iPhones hore
Markaa waa Pixel Buds Earphones, tartan ka socda AirPods?
Google waxay dooratay inay qaado wadada ugu fudud ee tikniyoolajiyadda, waxay u heellan tahay soo saarista qalab taxane ah ...
Isdhexgalka Apple Music iyo Facebook Messenger ayaa durbaba bilaabmaya
Haddii aad u maleyneysay in farriimaha macruufka ay noqonayso dalabka kaliya ee dooranaya in lagu daro nidaamyada ...
Apple waxay soo sheegtaa khaladaadka ku jira adeegyada qaarkood sida App Store iyo Mac App Store
App Store ama Mac App Store, iyo adeegyo kale, waxaa saameeyay qaladaad la'aanta iyo marin u helka Apple.
Netflix waxay kordhisaa qiimaha bilaabmaya bisha soo socota
Netflix waxay ku dhawaaqday kororka qiimaha laga bilaabo bisha soo socota oo gaareysa .13,99 4 qaabkeeda Premium iyadoo la xallinayo XNUMXK.
Google waxay ku dhawaaqeysaa Google Home Max, oo ku hadla caqli cusub
Amazon, Apple iyo sidee bay noqon kartaa haddii kale, Google, waxay ku dhex milmeen dagaalka aftahannada caqliga badan ...
Init.ai, wuxuu ku biirayaa liiska dheer ee shirkadaha ay iibsatay Apple
Mana aha tii ugu horreysay mana noqon doonto shirkaddii ugu dambeysay, bilowga, iwm ee ay ragga ka socda ...
Parker waa orso caajis ah oo carruurta wax ku baraya isticmaalka ARKit
Orso caruureed ah oo la jaan qaadi kara Apple's ARKit oo xiisaha u yeelan doonta barashada ...
Jabsashada Yahoo waxay saameyn ku yeelatay dhammaan akoonnadii ay shirkaddu lahayd 2013-kii
Afar sano kadib jabsigii ay heleen server-yada Yahoo, waxaa la ogaaday in weerarka uu saameeyay dhamaan akoonada ay diiwaan galisay shirkada
Philips Hue wuxuu cusbooneysiiyaa adoo ku daraya shidmayaasha daciifka ah iyo dareemayaasha dhaqdhaqaaqa
Barnaamijka Philips Hue ayaa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo shaqooyin cusub, oo ay ku jiraan kuwa cusub oo shidan iyo sidoo kale dareemayaal dhaqdhaqaaq.
Shaqaalaha Apple waxay durbaba tijaabinayaan gudaha Apple Apple Cash
Laakiin waxaa jira hawl ay kaliya shaqaalaha Apple ku raaxeysan karaan iOS 11.1, si hufan u adeegsiga Apple Pay Cash.
Instagram waxay ku dareysaa doorashooyinka waqtiga-dhabta ah Sheekooyinkaaga
Munaasabaddan, Instagram waxay dooneysaa inay hal-abuurnimo ku darto sahanno waqtiga dhabta ah inta lagu jiro Sheekooyinka adeegsadayaasheeda oo ah dhammaan xanaaqa.
WhatsApp wuxuu abuuraa nuqul ka mid ah Emoji oo iyaga ka dhigaa mid iyaga u gaar ah
WhatsApp waxay abuurtay nuqul Emoji u gaar ah kaas oo si buuxda ugu dhex jiri doona arjiga, markii ugu horreysay ee Facebook.
Apple waxay si rasmi ah u bilawday macruufka 11.0.2 dhammaan isticmaaleyaasha
Apple ayaa soo saartay cusbooneysiinta cusub ee iOS: iOS 11.0.2, oo ah nooc ka dambeeya iOS 11 kaas oo hagaajiya cilladaha qaarkood isla markaana hagaajiya nidaamka guud.
Filim gebi ahaanba lagu duubay iphone wuxuu helayaa 10 magacaabid xafladda filimka Taipei
Filimka The Great Buddha, oo lagu duubay iPhone 6 Plus, wuxuu ku soo koobay 10 magacaabis Faras Dahab ah Bandhigga Filimka Taipei.
Ireland ayaa lagu ganaaxi karaa inay ka soo ceshan weydo canshuurta Apple
Komishanka Yurub wuxuu ku ganaaxi karaa Ireland toddobaadkan guuldaradii uu ka soo celin waayey cashuurta Apple sida lagu booriyay
Bishii Nofeembar 2, Apple wuxuu soo sheegi doonaa sida rubuc maaliyadeedkii ugu dambeeyay u dhacay
Bishii Nofeembar 2, Apple ayaa soo sheegi doonta sida ay u dhacday 2017, gaar ahaan rubuca ugu dambeeya, kan ugu xoogan sanadka
Apple miyuu lumiyay nuxurkiisii ​​isagoo ilaaway fiicnaantii?
Dhacdooyinkii ugu dambeeyay sida shilalka waaweyn ee iOS 11 iyo faahfaahin kale oo badan ayaa dadka isticmaala ka dhigeysa inay ka tarjumayaan.
Soosaarayaasha Android waa waddo aad uga fog Aqoonsiga Face-ka
Falanqeeyayaashu waa kuwo aad u cad, soosaarayaasha leh Android waa waddo aad uga fog nidaamka kamaradda TrueDepth ee Apple.
Taxanaha Apple Watch 3 wuxuu keenaa jahwareer sababo la xiriira fashilka ku xirnaanta LTE
Hawlwadeenka Ingiriiska ee EE ayaa sabab u ah dhibaatooyinka isku xirnaanta LTE ee inta badan Apple Watch Series 3 ee gobolkan.
IPhone X wuxuu siin doonaa Samsung lacag ka badan midkeeda Galaxy S8
Samsung waxay samayn doontaa lacag aad u badan iyada oo ay ugu wacan tahay soo saarista shaashadda Apple ee iPhone X, oo gaadhaysa $ 110 halkii cutub
Google si ay u bilawdo tartame barnaamijka 'Amazon Echo Show', oo leh shaashad 7-inji ah
Google waxay arkeysaa sida ay ugu soo daahdo suuqa kaaliyeyaasha waxayna dooneysaa inay soo bandhigto nooc cusub oo leh shaashad 7-inch ah
Sida loo qaado sawirada JPEG ee leh iOS 11 halkii laga qaadan lahaa qaabka cusub ee HEIF
Hadaad rabto inaad kusii wado sii keydinta fiidiyowyadaada iyo sawiradaada qaabka H.264 halkii aad kaheli laheyd H.265 oo bixiya riixitaan sare, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Super Mario Run waxaa lagu cusbooneysiiyay heerar cusub iyo qiimo dhimis
Nintendo wuxuu cusbooneysiiyaa ciyaarta Super Mario Run ee loogu talagalay macruufka isagoo ku daraya heerar cusub marka lagu daro hoos u dhigista qiimaha ciyaarta oo dhan 50%
Kuwani waa Amazon Echo cusub, Fire TV iyo waxyaabo kale oo badan
Amazon waxay ka faa'iideysatay dhacdadeeda si ay u soo bandhigto qoys cusub oo alaab ah iyada oo ujeedkeedu yahay in ay si buuxda isu dhex gasho gurigaaga.
Apple wuxuu si faahfaahsan u sharraxayaa sida Aqoonsiga cusub ee Face uu u shaqeeyo
Apple waxay daabacday dukumiinti meesha hawlgalka Aqoonsiga Face-ka ee iPhone X si cad oo faahfaahsan loogu sharxay.
Apple wuxuu bilaabayaa "Sawirrada iyada", barta cusub ee muujineysa Laydhka Sawirka
Apple waxay liis garaysaa heesaa Shannon Wise oo ka socota The Shacks si kor loogu qaado iPhone 8 Plus Portrait Lighting.
Sida looga hortago furitaanka otomaatigga ah ee "Hada Wicitaanka" ee watchOS 4
Shaqada cusub ee hada ka socota Apple Watch wax xoogaa raaxo ah kuma lahan isticmaaleyaal badan, sidaa darteed waxaan ku tusi doonaa sida loo tirtiro.
FCC waxay dooneysaa Apple inay dib u howlgeliso raadiyaha FM-ka ee iphone
Apple ayaa ka jawaabtay waa maxay sababaha aysan u dhaqaajineynin howlaha raadiyaha FM-ka ee hada jooga ama kuwii hore.
Ciyaarta fiidiyowga ee caanka ah waxay ku dhacdaa App Store
thatgamecompany wuxuu noo keenayaa nidaamka deegaanka ee macruufka ubaxa caadiga ah, mid ka mid ah cayaaraha ugu quruxda badan ee noqday matxafka Matxafka Farshaxanka Smithsonian
Apple waxay iibsataa shirkadda falanqaynta sawirka iyo wajiga ee 'Regaind'
Aqoonsiga wajiga ee ay soo bandhigtay arjiga Sawirradu waa mid ku habboon goorta aan dooneyno inaan raadino sawirrada saaxiibbadeen ...
Paten wuxuu muujinayaa sida HomePod's "Wacyigelinta Meelaha" u shaqeyso
HomePod waxaa la sii deyn doonaa bisha Diseembar ee sanadkan. Xaqiiqa maanta ayaa la siidaayay isagoo faahfaahinaya sida ay u shaqeyso miyirkiisa
Spotify waxay dib noogu soo celinaysaa waqtigii aan la socon jirnay muusiggii aan dhageysanay markii aan labaatan jirnay
Miyaad ku dhiirrataa inaad dib ugu noqotid wakhtiga oo aad xusuusato miyuusiggii aad dhegaysan jirtay markii aad labaatan jirka ahayd? Spotify ayaa noo keenaysa liistada muusikada aad dhegeysatay markii aad jirtay 20 sano
FCC waxay ku boorinaysaa Apple inay dhaqaajiso Chips-ka iPhone FM si loo badbaadiyo nolosha
FCC waxay ka codsaneysaa Apple inay dhaqaajiso qalabka FM-ka ee iphone si loo badbaadiyo nolosha xaaladaha musiibooyinka dabiiciga ah
B&O waxay bilaabeysaa E8 samaacado sameecado leh AirPods oo isha ku haya
B&O waxay soo bandhigeysaa Beoplay E8, sameecadaha dhagaha ee runta ah oo leh qeexitaano iyo tayada alaabada qiimaha leh oo qiimo aad u xiiso badan leh
Podcast 9 × 04: IPhone X wuxuu dhaafayaa iPhone 8
Toddobaadkan barmaamijkeenna 'podcast' waxaan ku falanqeyneynaa iPhone 8 iyo 8 Plus, casriga casriga ah ee Apple inkasta oo ...
IPhone 8, 8 Plus iyo X waxay la jaan qaadayaan nidaamka meeleynta yurubiyanka Galileo
Apple waxay ku xaqiijisay bogga qeexitaanada iPhone 8, 8 Plus iyo X inay xiriir la leedahay Galileo, nidaamka meelaynta Yurub.
Apple wuxuu horeyba uga fikiray telefoon lix-inch ah sanadka soo socda
Awood u lahaanshaha abuurka aaladaha leh muraayadaha si muuqata hoos loogu dhigay ayaa ka dhigaysa Apple inay tixgeliso abuuritaanka iPhone ugu yaraan lix inji.
Hagaaji dhibaatooyinka ay iOS 11 ku hayso barnaamijyada qaar
Dhowr isticmaale ayaa bilaaba inay soo sheegaan dhibaatooyinka xiritaanka arjiga kadib cusbooneysiinta iOS 11 iyo nuqulkeedii ugu horreeyay ee dadweynaha.
MacX MediaTrans, sida ugu dhaqsaha badan ee loo keydiyo xogtaada iPHone [Liisanka Bilaashka ah]
MacX MediaTrans waa ka ugu fiican ee iTunes iyo iCloud lagu kaydiyo oo laga soo wareejiyo macruufka. Oo hadda waxaad ku heli kartaa bilaash
Fiidiyowga cusub ee 4k ee Apple Park
Apple waxay ku soo bandhigtay Sebtember 12 Apple Park ee Cupertino iyo gaar ahaan gudaha ...
Tani waa sida loo maareeyay dhammaan saadka ee bilawga iPhone 8
Markii ugu horreysay waxaan helnay waxyaabo garaaf ah oo na tusaya sida Apple u maamusho soo saarista qalab leh astaamahan.
Apple waxay soo bandhigaysaa 8-da sababood ee aan u jecel nahay iPhone-ka cusub ee 8, dhamaan wararka ku saabsan aaladda cusub ee Apple ayaa lagu soo ururiyey hal meel.
iPhone 8: dib u eegista iyo falanqaynta fiidiyowga
Waxaan tijaabinay iPhone 8 Plus cusub. Ma u qalantaa iPhone X? Soo ogow astaamaheeda iyo naqshadeynta cusbooneysiinta oo leh muraayad dhabarka.
IPhone 8 Plus wuxuu leeyahay kaamirada mobilada ugu fiican waqtigaan
Tijaabooyinka ay sameeyeen DxOMark waxay uga tagayaan iPhone 8 iyo 8 Plus inay yihiin kamaradaha mobilada ugu fiican taariikhda, kana soo hara inta kale.
Apple waxay ku deeqday hal milyan oo doolar si loogu caawiyo dhibbanayaasha dhulgariirkii Mexico
Apple ayaa dib u bilawday nidaamkeedii tabaruca waxayna ku dhawaaqday 1 milyan oo doolar oo gargaar ah Mexico
Helitaanka shaqo badan oo ka socota 3D Touch ayaa la laaban doonta iOS 11
Craig Federighi, Madaxa Injineeriyada softiweerka ee Apple, wuxuu xaqiijinayaa in howlaha badan ee 3D Touch uu kula laaban karo iOS 11.
Podcast 9 × 03: iOS 11 ayaa halkan yaal
Waxaan falanqeyneynaa cusbooneysiinta iOS 11, fikradaha ugu horreeya ee isticmaalayaasha rakibay nuqulkan cusub iyo wararka kale ee usbuuca
Apple wuxuu kobciyaa App Store cusub meelihiisa cusub
Apple wuxuu soo bandhigayaa baro cusub oo kor u qaadaya dhammaan wararka cusbooneysiinta iOS 11 App Store oo muujinaya qaybta cusub maanta.
24 saac ka dib markii la sii daayay iOS 11 waxaa laga helaa 10% qalabka
Waxay u muuqataa in inta badan adeegsadayaasha aaladaha la jaan qaada iOS 11 ay ka fikirayaan laba jeer markay cusbooneysiinayaan nooca ugu dambeeya ee iOS
HEIF, oo ah qaabka riixista ee keydineysa booskaaga iDevices-kaaga oo wata iOS 11
IOS 11 waxay leedahay nidaam cadaadis cusub: HEIF. Iyada oo aad ku keydin kartid waxyaabo badan oo warbaahin ah adoo adeegsanaya meel yar oo ka mid ah xusuusta kaydinta
Tikniyoolajiyada Aqoonsiga Aqoonsiga ee iPhone X ayaa gaari kara dhammaan iPhone-ka 2018
Falanqeeye Kuo wuxuu xusayaa, illaa iyo inta ay aqbalaan adeegsadayaasha, tikniyoolajiyadda Aqoonsiga Aqoonsiga in loo kordhin doono iPhones-ka 2018
Kiniinkee ayaa carruurta loogu talinayaa? IPAD?
Waxaan kaa caawineynaa inaad doorato kiniiniga carruurta ama aad diiradda saareyso kuwa yaryar ee aad iibsaneyso, iyo wixii ka sarreeya waxaan kuu sheegi doonaa haddii iPad-ka uu la kulmayo dhagaystayaasha carruurta.
Pokémon GO wuxuu sidoo kale taageero ku lahaan doonaa Apple's ARKit
Ragga Niantic waxay xaqiijinayaan in Apple's ARKit uu imaan doono Pokémon GO si aan u helno khibrad dhab ah oo dhab ah.
Xarunta dukaamaysiga Westfield Century City ee magaalada Los Angeles waxay lahaan doontaa Apple Store hormar iyo ballaadhan
Dukaanka Apple oo ku yaal Westfield Century City shopping centre ee magaalada Los Angeles, ayaa waxaa ku socda dayactir. Bilowga ...
Ming-Chi Kuo: Apple ma awoodi doono inuu la kulmo baahida iPhone X illaa sanadka soo socda
Falanqeeye Ming Chi Kuo wuxuu ku xaqiijinayaa qoraal cusub in Apple aysan awoodi doonin inay qanciso baahida loo qabo iPhone X illaa sanadka soo socda ee 2018.
Taageerada maqalka ee FLAC waa mid rasmi ah sida iPhone 7
Imaatinka macruufka 11, aaladaha Apple waxay asal ahaan la jaan qaadayaan codka FLAC, laga bilaabo iPhone 7 ilaa Apple TV 4K
U ekaanshaha tikniyoolajiyadda Aqoonsiga Apple ee Face ID-ga Xbox Kinect
Falanqeyn taxaddar leh oo ku saabsan dareemayaasha qotada dheer iyo iskaanka lagu daray iPhone X ayaa si dhakhso leh noo xusuusinaysa Xbox Kinect caan ah
Apple waxay qorsheyneysaa inay ka takhalusto dhammaan "scanners virus"-ka App Store
Shirkadda Cupertino ayaa dooneysa inay baytariyada xoogaa dhigto waxayna baabi'inaysaa dhammaan codsiyada loo maleynayo in taleefankaaga looga baarayo fayrasyada.
AirPower waxaa laga yaabaa inaysan la jaan qaadi karin aaladaha dhinac saddexaad
Apple waxay ku dhawaaqday AirPower, saldhiga lacag la'aanta ah ee lagu xiro seddex aalad isla waqtigaas iyadoo la adeegsanaayo nidaamka Qi.
Federighi wuxuu muujinayaa faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan Aqoonsiga Face
Federighi wuxuu cadeynayaa fikradaha muhiimka ah ee ku saabsan Aqoonsiga cusub ee Aqoonsiga, sida inuu ku shaqeynayo muraayadaha indhaha ama asturnaanta xogta.
IPhone X wuxuu ku kici doonaa kharash badan Talyaaniga, Ireland iyo Hindiya
Qiimaha IPhone X wuu ku kala duwan yahay wadanba wadan iyadoo kuxiran cashuurta iyo sarifka lacagaha. Wadamada qaarkood sida Talyaanigu waxay leeyihiin qiime sare.
Shirkadda Spotify waxay soo saareysaa codsi u gaar ah oo loogu talagalay farriimaha Apple
Midkii ugu dambeeyay ee ku biira Apple tirada sii kordheysa ee barnaamijyada Fariimaha waa Spotify, oo ah adeegga baahinta muusikada adduunka ugu caansan.
Awood ahaan sida MacBook Pro, tani waa A11 Bionic ee iPhone 8
Apple ma joojineyso isku dayga ah inay sii wado bixinta taleefanka ugu awooda badan suuqa, A11 Bionic ee kujira iPhone 8 ayaa u awood badan sida MacBook Pro.
Apple waxay xaqiijineysaa in Aqoonsiga Face uusan ku guuldareysan soo bandhigida iPhone X
Markii Craig uu soo qaatay iPhone X talaabadii ugu dambeysay ee Talaadadii, wajiga furitaanka nidaamka Aqoonsiga Aqoonsiga ayaa fashilmay, laakiin hadda waxaan ogaanay sababta.
Waxaad ka iibsan kartaa sanduuqa lacag-bixinta wireless-ka AirPods si gooni gooni ah
AirPods wixii hada ka dambeeya waxay lahaan doonaan sanduuq la jaan qaadaya heerka qiimeynta wireless wireless, sidoo kale sanduuqa si gooni ah waad u iibsan kartaa.
Kadib qodobka muhiimka ah, iPad Pro wuxuu ku kacayaa qiimo dhan 70 euro noocyada leh keyd badan
Tas keyynote, Apple wuxuu go'aansaday inuu wax ka beddelo qiimaha iPad Pro adoo ku kordhiya 70 euro. Dabcan, kaliya 256 iyo 512 GB ee kaydinta.
Apple wuxuu dib uhabeyn ku sameeyaa fikradda iTunes iyadoo cusbooneysiinteeda cusub: iTunes 12.7
Apple waxay sii deysay iTunes 12.7, oo ah nuqul muhiim ah tan iyo markii App Store-ka laga tirtiray gudaha wuxuuna diiradda saarayaa oo keliya waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
Hadda waxaad ka arki kartaa furaha shalay adoo adeegsanaya bogga Apple
Iyadoo loo marayo websaydhka Apple waxaan hadda ku raaxeysan karnaa nuxurka bandhigga ee iPhone X, Apple Watch 4k, iPhone 8 iyo 8 Plus iyo Taxanaha 3
Abaal marin loo hayo Steve Jobs ayaa furaya Muhiimadda iPhone X
Soo bandhigida Muhiimka ah ee Apple Watch cusub iyo iPhone 8, 8 Plus iyo iPhone X cusub waxay ku bilaabmaysaa qadarin Steve Jobs
Apple wuxuu soo bandhigayaa Apple Watch Series 3 cusub
Taxanaha cusub ee Apple Watch 3 wuxuu leeyahay isku xirnaan iyada oo loo marayo SIM dalwad ah oo aan ku qaban karno hawlo ka madax bannaan iPhone.
Deeqda weyn ee Apple Kadib Irma e Harvey
Apple marwalba way ka warqabtaa waxa ka dhacaya adduunka iyo wax badan markaan ka hadlayno noocan ah ...
Tim Cook ayaa sheegay in alaabada Apple ay "badalayaan dunida"
Forbes ayaa wareysi la yeelatay Apple ka dib markii ay kaalinta seddexaad ka gashay liistada sanadlaha ee saameynta bulshada. Halkaas ayuu kaga hadlay mowduucyo kala duwan sida caafimaadka.
IPhone-yada cusub waxay taageeri doonaan heerka Qi ee saldhigyada lacag la'aanta wireless
IPhone-yada cusubi waxay isticmaali doonaan heerka Qi si markaa saldhigyada hadda jira ay is waafajin karaan, laakiin saldhiga rasmiga ah wuxuu qaadan doonaa waqti uu ku yimaado
Sida loo arko furaha bandhigga ee iPhone X toos ah
Waxaan ku tusineynaa dhamaan xulashooyinka aad heli karto si aad ula socon karto dhacdada muhiimka ah ee bisha Sebtember 12 halkaasoo aan ku arki doonno iPhone X cusub
IPhone X wuxuu noqon doonaa aaladda ugu awoodda badan qalabka IOS taariikhda
Processor-ka iPhone X, oo ah A11 Fusion, wuxuu yeelanayaa lix koronto: 4 waxqabad sare leh iyo 2 waxtar yar, si loo xoojiyo iPhone oo dhan.
IPhone 7 Plus weli waa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan inkasta oo uu suuqa ku jiray muddo sannad ah
In kasta oo uu muddo sannad ah suuqa ku jiray, haddana iPhone 7 Plus waa weli midka ugu dhakhsaha badan ee aan ka heli karno suuqa.
Waxa ugu fiican ee iPhone X weli lama arko
Waxaan ka horreynaa mid ka mid ah bandhigyada ugu xaddidan sanadihii la soo dhaafay, laakiin waxa ugu fiican ee ku saabsan iPhone X weli lama arko
Dib u laabo waxaad horey u haysatay codsiyadaada diyaar u ah iOS 11
Readdle waxay leedahay barnaamijyadeeda oo diyaar u ah inay cusbooneysiiyaan isla marka ay iOS 11 diyaar u yihiin qof walba oo leh astaamo cusub
Niantic wuxuu ku dhawaaqayaa taariikho cusub oo loogu talagalay Pokémon Go Festival ee Yurub
Niantic waxay dib u dhigeysaa dhacdooyinka Yurub Pokémon Go Safari iyagoo isku dayaya inay helaan waqtiga ugu fiican ee dhammaan tababarayaashooda Pokémon inay kaqeyb galaan.
Xogta ugu Dambeysa oo Muujineysa Sida Aqoonsiga Face-ka u shaqeyn doono
Daadinta nooca Master Master-ka ee iOS 11 ayaa raadad ku reebay hawlgalka aqoonsiga Face, furitaanka wajiga ee iPhone 8.
Habka Sawirka cusub, Tone True tone iyo inbadan oo lagu muujiyay iOS 11 GM
IOS 11 GM ayaa siideysay oo muujisay xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan iPhone 8 oo Apple ay soo bandhigi doonto Talaadada soo socota, Sebtember 12
Raac soo bandhigida iPhone 8 ee ku saabsan iPhone News
Talaadada, Sebtember 12, waxaad si toos ah ula socon kartaa soo bandhigida taleefanka iPhone 8 iyo sidoo kale dhammaan wararka ay Apple nagu tusayso dhacdadiisa gaarka ah.
Tiyaatarka Steve Jobs waxaa ka mid ah wiishashka wareegaya iyo qol demo qarsoon
Tiyaatarka Steve Jobs Theater ee lagu soo bandhigi doono iPhone 8 waa dhisme naqshad leh oo sir badan ka buuxaan, laakiin way ka sii yaraanayaan
Podcast 9 × 01: Jidka u xaaraya iPhone 8
Toddobaad ka hor dhacdada bandhigga ee iPhone 8, waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aan ku arki karno soo bandhigista Apple, qeexitaankiisa iyo qiimaheeda
Websaydhka soo saaraha Apple ayaa u muuqda in la jabsaday
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in xarunta soosaaraha Apple la jabsaday.
YouTube-ka loogu talagalay macruufka ayaa hadda noo oggolaanaya inaan si toos ah u soo tabino cayaarahayaga
Toos ula wadaag waxa ka dhacaya barnaamijyada iyo ciyaaraha aad ku rakibtay iPhone-kaaga ama iPad-kaaga mahadnaqa cusboonaysiinta YouTube ee iOS